दरवारमा पूर्व राजाको पत्रकार सम्मेलनका दृश्य | Wagle Street Journal
शाह हलमा पुग्नु आधा घन्टा अगावै पत्रकारहरु त्यहा उपस्थित थिए । नेपालमा आयोजना गरिएको सम्भवत सबैभन्दा ठूलो पत्रकार सम्मेलनमा लगभग साढे तीनसय तीनसय सम्वादाता, टीभी म्यामेराकर्मी, फोटोपत्रकार तथा प्राविधिक उपस्थित थिए ।
कास्की हलमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरु भएको यो पहिलो पटक होइन । राजतन्त्र रहदा पूर्व राजाले त्यही भवनमा प्रधानमन्त्री लगायतका पदवाहकहरुलाई सपथ गराउथे भने विदेशी राजदूतहरुको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दथे । ‘तर यतिधेरै संख्यामा पत्रकार देखेका पहिलोपटक हो,’ कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा खटिएका सिभिल पोशाकका एकजना सुरक्षकर्मीले भने ।
कास्की हलको ठ्याक्कै माथि सिंहासन छ । माथ्लो तल्लामा उक्लिने ठूलो भर्यांगको फेद भन्दा केही मिटर अगाडी रातो कपडाले मोरिएको एउटा पिर्कामाथि राखिएको रंगीन कुर्सीमा बसेर शाहले विज्ञप्ति पढेका थिए । त्यो मुख्य कुर्सी पछाडी गोलाकाररुपमा अन्य केही कुर्सी राखिएका थिए । भर्याङ्को दुइ तिर दुइ खुट्टामा उभिएर एकअर्कालाई फैलिएका हातले आक्रमण गर्न खोजिरहेका दुइ वटा बाघहरुका सजावट-मुर्ती थिए । शाह बसेको कुर्सी दाया-बाया भित्तामा ठूला गमला थिए जसमा कम्तिमा चार थरी फुलहरु फुलिरहेका थिए । हलका भित्ताहरुमा कुनै पनि योजना नगरिकन टासिएजस्तो लाग्ने ठूला कदका केही पूर्व राजाहरुका पूर्णकदका चित्र थिए । मुख्य गेटबाट छिर्नासाथ देब्रेपट्टी क्रमशः प्रतापसंह शाह, पृथ्वीनाराण शाह, महेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाहका चित्र थिए । दायाँपट्टी भित्तामा रणबहादुर र गिर्वाणयुद्धका चित्र थिए । हलमा हरियो रंगको एउटा ठूलो गलैचा र छिर्ने बाटोमा सानो रातो कार्पेट विछ्याइएको थियो ।
शाह हलमा प्रवेश गर्नासाथ क्यामेराहरुबाट अनगिन्ती फ्ल्यास निस्केका थिए जसले सिलिङ्मा झुन्डेका झर्झाउदा तथा भित्तामा अड्याइएका मैनवत्ति आकारका बत्तिहरुले दिएको प्रकाशलाई छायामा पारेको थियो । मुस्काउदै र दुइ हात जोडी नमस्ते गर्दै हलमा छिरेका शाह लगत्तै कुर्सीमा बसेका थिए । उनले बस्नेवित्तिकै भाषण पढ्न चाहेका थिए तर निरन्तरको क्यामेरा फ्ल्यासले उनलाई पढ्न अवरोध पुर्याएको जस्तो लाग्थ्यो । केहीबेरसम्म क्यामेराको फ्ल्यासको सामना गरेपछि शाहले हल्का खैरो रंगको सिसा भएको चस्मा लगाएर भाषण पढ्न थालेका थिए । तर फेरीपनि अनगिन्ति फ्ल्यासले प्रकाशको नियमिततामा व्यवधान पुर्याउदा उनलाई पढ्न थाल्न असजिलो भएको महसुस गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबीच शाहले मुस्काउदै फोटोग्राफरहरुलाई हात फैलाएर तस्बिर खिच्न बन्द गर्न संकेत गरेका थिए । केही समयपछि फ्ल्यासमा कमी आयो, शाहले चस्मा पुन लगाए र भाषण पढ्न थाले ।
शाहले बेलाबेला आफै अगाडीको भीडतिर हेर्दै नेपालीमा लेखिएको भाषण प्रस्टसँग पढेका थिए । भाषणको लिखित प्रति र अंग्रेजी अनुवाद सम्वादाताहरुलाई पछि बाडीएको थियो । भाषणको शीर्षक ‘पूर्व श्री ५ महाराजाधिरा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको प्रेश वक्तव्य’ छ ।
पत्रकार सम्मेलन निकै अव्यवस्थित र केही हदसम्म अमर्यादित पनि थियो । हलमा क्षमताभन्दा बढी पत्रकारहरुको उपस्थिती भएकाले सबैलाई कुर्सीीुगेको थिएन । धेरैले उभिने ठाउ पनि पाएनन् । शाहले बोलिरहदाको राम्रो दृष्टि पाउन नसकेका केही रुष्ट फोटोपत्रकारले छेक्नेलाई निरन्तर ठूलोस्वरमा अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गरिरहेका थिए । शाहले बोलिरहदा कम्तिमा एकपटक उनको आवाजै नसुनिनेगरी माइकमा समश्या उत्पन्न भएको थियो ।
राजतन्त्र रहदा राष्ट्रिय पोशाक लगाएर अदवकासाथ बस्नुपर्ने त्यही हलमा बुधबार सम्वादताहरुले पूर्ण र केही सर्न्दर्भमा आवश्यकताभन्दा बढी स्वतन्त्रता उपयोग गरेका थिए । उनीहरु कुर्सीमा उभिएका थिए, कोही अग्लो बालुवाले भरिएको फोहोर राख्ने मुढामा उभिएका थिए । एउटा त्यस्तै मुढा ढल्दा त्यहाको बालुवा पोएकिो थियो । यो हलमा पहिले कार्यक्रम केही फोटोपत्रकारलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइन्थ्यो । ‘केही सामान छुन पाइदैनथियो,’ एकजना फोटोग्राफरले भने- ‘सुरक्षाकर्मीले ‘छिस्, छिस’ इसारा गर्दै हटाउथे । कुर्सीमा बस्न पाइदैनथियो । एउटा किनारामा उभिएर फोटो र भिडियो खिच्नुपर्दथ्यो ।’
लिखित भाषण सक्ने वित्तिकै शाह कुर्सीबाट उठेका थिए । केही सम्वादाताले प्रश्न गर्न खोजेका थिए जसलाई शाहले स्विकार्न चाहेनन् । भीडभाडमाझ मुस्काउदै शाह सुरक्षाकर्मीको साघुरो घेरामा रहेर फर्किदै गर्दा कम्तिमा एकजना पत्रकारले उनीसँग हात मिलाउन भ्याएका थिए । त्यसपछि शाह निरन्तरको फ्ल्यास, सम्वादाताहरुको होहल्ला र सुरक्षाकर्मीको घेरमाझ नमस्ते गर्दै र मुस्काउदै हलबाट बाहिरिए ।
कम्तिमा तीनवटा नेपाली नीजि टीभी र एउटा विदेशी टीभी र केही नेपाली एफएमले शाहको सम्बोधन र त्यस अघि-पछिका विवरण हलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । माओवादी नियन्त्रणमा रहेको सञ्चार मन्त्रालय अर्न्तगतको सरकारी टीभीले भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थिएन ।
शाह हलबाट निस्किदा बाहिर पानी परिररहेका थियो जसले छाता नभएका सम्वादाताहरुलाई निस्कनबाट रोकेको थियो । हलभित्रै रहदा केही पत्रकारले उत्तेजित हुदै शाह बसेको कुर्सीमा बस्दै तस्बिर खिचाएका थिए । भिडमा कम्तिमा एउटा कुर्सी भाचिएको थियो । धेरैजसो पत्रकारले बाहिर चौरका तोप अगाडी पनि तस्बिर खिचाएका थिए । पूर्व राजाकै केही सुरक्षाकर्मीले आफ्ना मोवाइलबाट हलको पृष्ठभूमीमा एकअर्काको तस्बिर खिचेका थिए ।
कास्की हलमा शाहले प्रेश विज्ञप्ति पढ्दै गर्दा तथा त्यस अघि र पछि दरबारका दक्षिण र पश्चिम गेटमा र्सवसाधारणको भिड जम्मा भएको थियो । भीडले यदाकदा राजतन्त्रविरोधी नारा लगाउदै होहल्ला गरिरहेको थियो ।
शाहले विज्ञप्ति पढ्नु डेढ घन्टा अघि पश्चिमी गेटमा उपस्थित र कान्तिपुरले कुरा गरेका केही र्सवसाधारणले मुलुक शान्तिपूर्वक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोमा खुशी प्रकट गरे । उनीहरुले सरकारले पूर्व राजा शाहलाई बस्न नागार्जुनमा दरवार उपलब्ध गराएकोमा रोष पनि प्रकट गरे ।
‘पूर्व राजालाई दरवारको व्यवस्था गरेछ सरकारले हामीलाई पनि केही गर्दैलाकि भनेर आएको,’ अर्घाखाचीको दुर्गम गोफुगा गाउका ३० बर्षो टोपनारायण पौडेलले भने । उनी उस्तै उमेरका आफ्ना गाउलेहरु हर्रिप्रसाद पौडेल र कमलप्रसाद पौडेलसँग त्यहा पुगेका थिए । ‘गरिवीले परिवार पाल्न नसकेपछि सकेसम्म स्वदेशमै नभए विदेशमा’ रोजगार गर्ने उद्देश्यले काठमाडौ आएको पौडेल बन्धुहरुले बताए । तीनैजनाले साउदी अरवजान अर्न्तवार्ता दिइसकेको तर तलव अति कम भएकाले चित्त नबुझेको बताए । उनीहरुसँग गरिवी निवारण कोषले निकालेको ‘गरिवी निवारण कोष, एक चिनारी’ शीर्षकको पुस्तिका थियो । ‘हिड्दैगर्दा यसको अफिस देख्यौ,’ टोपनारायणले भने- ‘केही सहयोग पाइहालिन्छ कि गाउमा काम थाल्न भनेर त्यहा छिरेका थियौं । यही पाईयो ।’
उनीहरुले पूर्व राजा दरवारबाट हट्नु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै देशलाई उन्नती तिरलैजान ‘भ्रष्टाचारीलाई फासी दिइने कानून बनाउनुपर्ने’ विचार प्रकट गरे ।
शाहको भाषण पछि दक्षिणी गेटमा जम्मा भएको भीड मुसलधारे पानीका कारण तितरवितर भयो । बर्षा रोकिएपछि भीड पश्चिमी गेटमा जम्मा भएको थियो जहाँबाट शाह साझ साढे आठबजे निस्केका थिए ।
पश्चिमी गेटमा राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीहरुका दुइ समुह थिए । पूर्वराजावादीले गेटसँगै टासिएर ‘राजा हटाउने विदेशी दलाल’लाई धारेहात लगाएर सरापेका थिए भने गेट अगाडीको मुख्य सडकसँगै उभिएका गणतन्त्रवादीले ‘छिटो निस्क ज्ञानेन्द्र’ नारा लगाएका थिए । राजतन्त्रवादी भीड सानो थियो जसमा धेरैजसो बृद्ध तथा आक्रोशित महिलाहरु थिए । गणतन्त्रवादी भीड अलि ठूलो थियो जसमा जोशिला तन्नेरीहरु थिए ।
प्रहरीले दुबै भीडलाई त्यहाबाट हटाउन खोजेका थिए । ‘राजावादीहरुलाई गेटमा राख्ने हामीलाई चाहि हटाउने-‘ गणतन्त्रवादीहरुले प्रहरीलाई भने । ‘हामी ज्ञानेन्द्रलाई रोक्न आएको होइन, जान दिन्छौं,’ एकजना गणतन्त्रवादीले भने- ‘सके एकदुइ लात हानौला ।’
राजतन्त्रवादीले त्यस्तै रोस गणतन्त्रवादीहरुप्रति प्रकट गरेका थिए । ‘त्यस्तो हल्ला गर्ने फटाहाहरुलाई चाहि नहटाउने, हामीलाई चाहि हटाउन खोज्ने-‘ पूर्वराजावादी बृद्धले प्रहरीलाई भनिन् । ‘उहाँले (गणतन्त्र) स्विकार गर्नुभयो तर हामीलाई स्विकार छैन,’ आफूलाई राष्ट्रवादी बताउने ५२ बर्षो कृष्णप्रसाद शाहीले ज्ञानेन्द्र शाहको भाषणबारे भने- ‘उनीहरुले भन्दैमा छाड्नु हुदैन ।’
‘ती हिन्दू अतिवादी र विदेशी पैसामा चलेका मान्छे हुन्,’ गणतन्त्रवादी २० बर्षो कृष्ण बास्तोलाले राजावादीबारे भने- ‘देश गणतन्त्र भएकोमा मलाई खुशी लागेको छ । ज्ञानेन्द्र र्सवसाधारण जनता भएर बसुन्, केही छैन । राम्रोकाम गरेर राष्ट्रपती नै भएपनि केही छैन ।’
← Kumaris, the Living Goddesses, of Nepal (or Kathmandu Valley) छातामुनी पिसकोर →
4 thoughts on “दरवारमा पूर्व राजाको पत्रकार सम्मेलनका दृश्य”
keshuvko June 11, 2008 at 7:47 pm
कुर्सीमा बस्दै तस्बिर खिचाएका मात्रै हैनन् अरू सामान पनि त तोडफोड भयो रे नि! चोरी पनि त भयो नि केही चिजबिज।
आकार June 12, 2008 at 3:41 pm
पत्रकारलाई के भा’ हो ? नपाउने ले केरा पायो, खै के गरी खायो भन्थे, त्यै ताल गरे नि । पत्रकार सम्मेलन मा पत्रकारको हैसियतले गएपछि, संयमित त हुनुपर्ने थियो ।
मिलन बगाले June 13, 2008 at 5:56 am
this is not comment it is peace song
आउ नेपाली दाजुभाई गरौ हातेमालो
देश माथि उठाउने अब हाम्रो पालो।
मिल्नुपर्छ सबै हामी शान्ति एउटै बाटो
पसिना र परिश्रमले सिच्नुपर्छ माटो।
एउटै साझा घर हाम्रो एउटै हाम्रो जात
देश राम्रो बनाउन जुटौं कोटी हात।
तराईमा सुन फलोस हिमालमा मोती
पहाडबाट झुल्किरहोस बिहानीको ज्योति।
फुटनु हुन्न जुट्नु पर्छ देश राम्रो बन्नुपर्छ
हाम्रो नेपाल हामी नेपाली एकै स्वरमा भन्नुपर्छ।
मिलन बगाले तनहु
Reality Bites June 14, 2008 at 3:48 am
Once uponatime, There wasaking in Nepal…………Really touchy story lines……..I have read one line somewhere in the hit magazine that………..If Gyanendra was notaperson who directly involved in Royal massacre, then how much he felt pain in the absence of his beloved brother’s family. we can’t imagine !!!….. That line was actually seen in the day of Late king’s retirement day .